Andro manerantany momba ny tontolo iainana: ny kapa amin'ny sandan'ny tany dia fanoloran-tena amin'ny EarthCheck
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Andro manerantany momba ny tontolo iainana: ny kapa amin'ny sandan'ny tany dia fanoloran-tena amin'ny EarthCheck
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana, 5 jona 2020, no andro Firenena Mikambana ho famporisihana ny fahatsiarovan-tena manerantany sy ny hetsika hiarovana ny tontolo iainana. amin'ny Fivarotana kapa sy morontsiraka, ny andro tontolo iainana dia asandratra tsy amin'ity andro ity ihany, fa ny 365 andro rehetra amin'ny taona.
Ny Sandals Resorts rehetra dia mandray anjara amin'ny programa fandaharana momba ny benchmarking sy ny mari-pahaizana EarthCheck. Manomboka amin'ny fanodinana ka hatrany amin'ny fitehirizana, ny fandraisana andraikitra ekolojika dia fanoloran-tena amin'ny Sandals. Satria ny fitiavana "maitso" dia natao ho an'ny fitiavana, ny fitiavana ny tontolo iainana dia nanjary toetra faharoa.
Ny programa EarthCheck
Ny iraka ataon'ny Sandals Resorts & Beaches dia ny manolotra ny traikefa fialan-tsasatra farany any Karaiba amin'ny alàlan'ny fanavaozana, azo itokisana ary fanolorana hatrany ny serivisy sy fotodrafitrasa azo antoka sy avo lenta indrindra ho an'ny vahiny, sady manisy tombam-bidy ho an'ny loharanon'olombelona ary anisan'ny mpiorina tontolo iainana indrindra ary toeram-pitsangatsanganana ho an'ny fiaraha-monina eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny.
Ny fenitra Oceanic
Ny Oceanic Standard (TOS) dia torolàlana feno amin'ny fampiharana fampiharana maharitra amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, mifantoka amin'ny fampihenana ny plastika tokana ampiasaina. Oceanic Global, ny hery ao ambadiky ny TOS, dia manome loka ireo orinasa nahavita fanatontosana andraikitra sasany amin'ny fampiharana fanao maharitra miaraka amina marika maromaro hanamarihana ny fanolorany tena ho an'ny fiarovana sy ny fandraisana andraikitra ara-tontolo iainana. Mirehareha ny trano fandraisam-bahiny satria nahazo ny fanavahana ny mpikarakara maharitra sy ny voamarina tsy misy ahitra.
Fampiharana tsara momba ny tontolo iainana
Ny Sandals Group dia manolo-tena amin'ny fitehirizana ny harena voajanahary ary manome traikefa fialan-tsasatra tsara ho an'ny vahininy mandritra ny fotoana fohy hanatanterahana ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy sosialy mifandraika amin'ny asa.
Fampahafantarana ny mpiasa
Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia mandray anjara amin'ny atrikasa sy seminera notarihin'ny komitin'ny tontolo iainana, ireo fikambanan'ny governemanta eo an-toerana, ary koa ireo fikambanana tsy miankina amin'ny tontolo iainana.
Fandaharana fiarovana ny rano
Ny fanaraha-maso ny fampiasana rano tanteraka amin'ny fananana (dobo, efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, efitrano fisakafoanana, ary faritra zaridaina) dia notanterahina tsy tapaka.
Programme fitantanana angovo
Manampy amin'ny fitsitsiana angovo mandeha ho azy ny fampiasana ny timer amin'ny fitaovana elektrika toy ny tadion-drano, efitrano fievohana amin'ny spa, jiro ivelany amin'ny lalan-tongotra, ary fitaovana fampangatsiahana any an-dakozia.
Fandaharana fitantanana ny fako
Ny fomba fanao sy fomba fanariana fako ao amin'ny Resort Sandals toy ny fanodinana lamba rongony sy farafara, sakafo, taratasy any amin'ny birao ary fonosana dia anisan'ny fanazaran-tena amin'ny andro asa.
Fanaraha-maso ireo zavatra mampidi-doza
Sandals Resorts & Beaches dia mamaritra ny mety amin'ny vokatra rehetra alohan'ny hanaovana ny fividianana rehetra ary manome fiofanana feno ho an'ny mpiasa isaky ny mividy simika na fitaovana vaovao hampiasaina ao amin'ny hotely.
Fampandrosoana ara-tsosialy sy kolontsaina
Ho fanohanana ny kolontsaina sy ny fampandrosoana eo an-toerana, ny Sandals dia mampiroborobo sy mivarotra fitsangatsanganana an-toerana sy manintona amin'ny fanekena manokana ny "fitsidihana maitso" amin'ny birao fitetezam-paritany. Sandals Resorts dia manasa ireo mpivarotra asa-tanana eo an-toerana haneho sy hivarotra ny entan'ny asa tanana - ankafizin'ny vahiny ary koa ny mpanao asa tanana.
Ny ahitra farany
Ny Sandals Resort rehetra dia nanala ny mololo plastika sy mpangalatra nampiasaina manerana ny toeram-pialan-tsasatra. Misy amboara taratasy ara-tontolo iainana raha ilaina.
Fanesorana an'i Styrofoam
Ny Sandals Resort rehetra dia nanala an'i Styrofoam nampiasaina manerana ireo trano fandraisam-bahiny. Ity dia fomba iray hafa hampihenan'ny Sandals ny dian-tongotr'izy ireo ary hanatsara ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina Karaiba.
Ny Sandals Foundation
Sandry sandan'ny philanthropic sandaly, ny Sandals Foundation, manohy mampiroborobo ireo programa izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana, ny fanabeazana ary ny fiarahamonina ho fandraisana anjarany amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny tontolo marefo.
Fanomanana ny fisokafan'ny fizahan-tany any Jamaika tanteraka eo alohan'io
Ny fihenan'ny serivisy serivisy avy any Shina mankany Etazonia